Oppo K3 bụzi gọọmentị: chọpụta ihe niile gbasara etiti ọhụrụ a | Gam akporosis
Oppo K3 bụzi gọọmentị: chọpụta ihe niile gbasara etiti ọhụrụ a
Dị ka Xiaomi, Samsung, Huawei na Honor, Oppo bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ụlọ ọrụ ekwentị mkpanaaka. Nke a, mgbe emechara ya Oppo A9X Ihe na-erughi otu izu gara aga, ugbu a ọ na-eji ngwaọrụ ọhụrụ abịa.
Ihe nlere a nke na - ewere ọnọdụ ugbua na ogbo bụ Oppo K3, nke dị n'etiti na igwefoto na-apụta na-abịa na atụmanya ahịa dị elu, dịka nkọwa ya na atụmatụ ya na-akwado ya n'ụzọ dị ukwuu, ọ bụ ezie na ọ bụghị karịa uru ya maka ego, nke dị ezigbo mma. Ka anyị matakwuo ya nke ọma!
1 Oppo K3 atụmatụ na nkọwa
Oppo K3 atụmatụ na nkọwa
Ihe mbụ anyị ga - amalite ịkọwa maka ekwentị mkpanaaka bụ ihuenyo ya, nke na-eji teknụzụ OLED ma mejupụta diagonal nke 6.5 sentimita asatọ. Nke a, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, na - enye mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080 na akụkụ 19.5: 9.
Ndị ole na ole na-ejidekwa panel ahụ dị ezigbo mkpa n'elu na akụkụ n'akụkụỌ bụ ezie na anyị enweghị ike ikwu otu ihe ahụ banyere onye dị ala, dị ka a na-akpọpụta ya; n'ihi ya, anyị na-enweta a 91% ihuenyo-ka-ahụ ruru. N'ụzọ doro anya, dịka o nwere igwefoto mgbapụta, ọ nweghị ụdị ọkwa ọ bụla. Mana, dịka a ga - asị na ihe ndị a niile ezughi, o nwere ọgbọ nke isii na - agụ akwụkwọ mkpịsị aka, nke dị ezigbo ọsọ ma zie ezi, yana mpaghara nyocha ya ka ukwuu karịa ndị a na - ahụkarị n'ọtụtụ ekwentị.
Nhazi ahụ ọ kwadebere bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na nso nso, nke bụ onye ọzọ karịa Snapdragon 710, SoC webatara naanị ọnwa ole na ole gara aga nke na-enye ezigbo ọrụ siri ike ma dịkwa mma. Chipset a nwere ike ịgba ọsọ ọ bụla ngwa na egwuregwu ọ bụla etinyere n'ihu ya, yana ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na ikike RAM na ROM, nke ruru 8 GB LPDDR4X na 128 GB, n'otu n'otu, na mbipụta ya kachasị elu. Enwekwara ụdị abụọ dị mkpirikpi, 6 + 64 GB na 6 + 128 GB; ha niile nwere batrị mAh 3,765 na 3.0-watt VOOC 20 teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa.
Banyere ngalaba foto, Oppo K3 na-abịa na igwefoto azụ abụọ, nke nwere isi ihe 16-megapixel na ihe mmetụta omimi 2-megapixel. Ejiri igwe onyonyo abuo, igwe onyonyo nke ọgụgụ isi, ihe ngosi AI, Ultra Clear Night View 2.0, Igwe ọnọdụ abalị, na teknụzụ mbelata mkpọtụ ọtụtụ, ma maka N'aka nke ọzọ, pop -up sensor bụ 16 MP, nke nwere uru nke AI na Mma Mma.
Sistemụ arụmọrụ A gam akporo 9 achịcha na uto nke ColorOS 6.0 abịa etinyegoro na ngwaọrụ ahụ. A na-etinyekwa atụmatụ njikarịcha sistemụ Oppo na ekwentị, dị ka GameBoost 2.0, ihe eji egwu egwuregwu maka arụmọrụ GPU na-arụ ọrụ n'oge nnukwu ọchịchọ maka ahụmịhe egwuregwu dị nro.
A na - esonye FrameBoost iji kenye usoro ihe eji eme ihe dika ihe achọrọ maka egwuregwu a. N'aka nke ọzọ, LinkBoost 2.0 na-enyere aka melite arụmọrụ netwọk na smartphone. N'ikpeazụ, TouchBoost na-enyere aka melite nzaghachi ihuenyo.
IKIRU 6.5 "FullHD + OLED nwere pikselụ 2.340 x 1.080 (19.5: 9)
Nhazi Qualcomm Snapdragon 710
Ram 6 ma ọ bụ 8 GB
Ohere TERLỌ N'IME 64 ma ọ bụ 128 GB
Ndị isi Azụ: 16 + 2 MP dual na sọrọ Ikanam flash na Ai / Ihu: 16 MP (mmapụta) na AI na Mma Mma
UMUAKA 3.765 mAh na 3.0 W VOOC 20 ụgwọ ngwa ngwa
OS Achịcha 9 achịcha n'okpuru ColorOS 6
Njikọ Nkwado Wi-Fi / Bluetooth / Dual-SIM / 4G LTE
Atụmatụ ndị ọzọ Na-ihuenyo akara mkpisiaka agụ / ihu ude / GameBoost 2.0 / TouchBoost / FrameBoost / LinkBoost 2.0
N'aga n'ihu ekwentị na-amalite taa na China, site na ụlọ ahịa ịntanetị Oppo na saịtị ndị ọzọ na-ere ahịa n'ịntanetị. Ahịa nke mbipụta 6GB RAM ga-amalite na June 1, ebe ụdị 8GB RAM ga-ere obere oge ma otu ọnwa gachara. Enwere ike ịzụta ihe niile na agba dị ka Nebula Purple, Morning White, na Farm Black. Ahịa dị ka ndị a:
Oppo K3 6 + 64GB: 1,599 yuan (~ euro 206).
Oppo K3 6 + 128GB: 1,899 yuan (~ euro 245).
Oppo K3 8 + 128GB: 2,299 yuan (~ euro 297).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo K3 bụzi gọọmentị: chọpụta ihe niile gbasara etiti ọhụrụ a
Samsung si Galaxy S9 na S9 + enweta a isi update dị iche iche na ndozi